ဇူလိုင်လ 2022 တွင် Bitcoin အရောင်းအ၀ယ်လုပ်နည်း လေ့လာပါ။ ကုန်သွယ်မှုလမ်းညွှန်2ကို လေ့လာပါ။
အိမ်၏သက်သောင့်သက်သာဖြင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးရောင်းဝယ်ခြင်းသည်သင်၏ပျမ်းမျှဂျိုးရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအတွက်ဘယ်တော့မျှလွယ်ကူမည်မဟုတ်ပါ။ ကမ္ဘာပေါ်တွင်ပထမဆုံးသောဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချခြင်း cryptocurrency - Bitcoin သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အရောင်းအ ၀ ယ်အများဆုံးဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်သည်။ ဤလမ်းညွှန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင့်အားအရေးအကြီးဆုံးလိုအပ်ချက်များကိုလျှောက်ထားနိုင်သည် Bitcoin ကိုဘယ်လိုကုန်သွယ်လဲဆိုတာလေ့လာပါ။ အွန်လိုင်းအကျိုးဆောင်ခ၊ ကုန်သွယ်ရေးမဟာဗျူဟာများ၊ အမိန့်များ၊
အပိုင်း ၁: Bitcoin ကိုဘယ်လိုကုန်သွယ်မလဲဆိုတာကိုနားလည်ပါ
အဓိကအားဖြင့်ငွေလွယ်ကူခြင်းနှင့်မတည်ငြိမ်မှုများကြောင့် Bitcoin ကိုဒစ်ဂျစ်တယ်ရွှေဟုမကြာခဏရည်ညွှန်းလေ့ရှိသည်။ ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်, သင်ကျဆင်းမတိုင်မီဒီ cryptocurrency ဘယ်လိုကုန်သွယ်ရေး၏ရှင်းလင်းသောအခြေခံကိုနားလည်ကြောင်းထိပ်တန်းဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီလိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့်သင်ကိုယ်တိုင်အန္တရာယ်ကိုကြိုတင်တွက်ဆပြီးအရောင်းအ ၀ ယ်လုပ်နိုင်တဲ့အကောင်းဆုံးအခွင့်အရေးပေးပါလိမ့်မယ်။
Bitcoin Trading ၏အခြေခံဘာတွေလဲ။
ရိုးရိုးလေးပြောရလျှင် Bitcoin အရောင်းအဝယ်တွင်ဒီဂျစ်တယ်အကြွေစေ့၏စျေးနှုန်းကိုမှန်ကန်စွာခန့်မှန်းရန်ကြိုးစားခြင်းပါဝင်သည်။ စျေးနှုန်းကိုစျေးကွက်၏ ၀ ယ်လိုအားနှင့် ၀ ယ်လိုအားဖြင့်သတ်မှတ်ထားသည်။
မြူများကိုရှင်းလင်းရန် Bitcoin ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာလက်တွေ့ဥပမာတစ်ခုကိုအောက်တွင်ကြည့်ပါ။
သင်သည် ယူရိုနှင့် Bitcoin အရောင်းအဝယ်ဖြစ်နေသည်ဟု မြင်ယောင်ကြည့်ပါ။
သင်ရွေးချယ်ထားသော အွန်လိုင်းအရစ်ကျတွင် ၎င်းကို BTC/EUR အဖြစ်ပြသပါမည်။
သင်၏ကုန်သွယ်မှုအချိန်တွင်၊ BTC/EUR တန်ဖိုးသည် $45,162 ဖြစ်သည်။
စုံတွဲတစ်တွဲသည်စျေးနှုန်းမြင့်တက်မှုကိုမြင်တွေ့ရလိမ့်မည်ဟုခံစားနေရသည် - သင်လုပ်ရန်ဆုံးဖြတ်သည် ဝယ်ခြင်း $1,000 တန် အော်ဒါ။
နာရီများ ကုန်ဆုံးသွားပြီး BTC/EUR သည် 5% တန်ဖိုးတက်လာသည် - $47,420 ၏အသစ်စျေးနှုန်းနှင့်ညီမျှသည်။
သင်လောင်းကြေး၏ ကနဦး $1,000 မှ - သင်သည် $50 ($1,000+5%) အမြတ်များ ရရှိခဲ့သည်။
သငျသညျမွငျသကဲ့သို့, သင် Bitcoin pair တစုံကိုဝယ်ခြင်းနှင့်သင်၏အယူအဆနှင့်အတူမှန်လျှင်, သင်အမြတ်အစွန်းအတွက်ရပ်တယ်။ သတိမထားမိသူများအတွက် Bitcoin ကိုသင်တိုတောင်းနိုင်သည်။ ဤလမ်းညွှန်တွင်နောက်ပိုင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့ဖော်ပြထားသည်။
ကုန်သွယ်ရေး Bitcoin Bitcoin
Bitcoin ကိုမည်သို့ကုန်သွယ်ရမည်ကိုလေ့လာရန်ရှာဖွေသောအခါစားပွဲပေါ်၌မတူညီသောကုန်သွယ်ရေးအတွဲများရှိသည်ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ အကယ်၍ သင်သည် Forex ကိုမကုန်မှီရောင်းဝယ်ခဲ့လျှင်၎င်းမည်သို့လုပ်ဆောင်သည်ကိုအနည်းငယ်သိလိမ့်မည်။
မည်သည့်စွမ်းရည်နှင့်မဆို ငွေကြေးဆိုင်ရာ အတွေ့အကြုံမရှိသူများအတွက် - cryptocurrency အရောင်းအ၀ယ်များကို အတွဲများဖြင့် ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။ အရောင်းအ၀ယ်အတွဲများသည် မတူညီသောဒင်္ဂါးပြားများကြားတွင် စျေးနှုန်းများကို စုစည်းစေပြီး ၎င်း၏တန်ဖိုးကို သတ်မှတ်နိုင်စေပါသည်။
Bitcoin ကိုအထူးသဖြင့်လူသစ်များအတွက်ကုန်သွယ်ရန်အသုံးအများဆုံးနည်းမှာ 'crypto-to-fiat' အတွဲများမှတဆင့်ဖြစ်သည်။ ဤသည် Fiat ငွေကြေးနှင့် Bitcoin ရောင်းဝယ်ခြင်းပါဝငျသညျ။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရလျှင်၊ Fiat ငွေကြေးသည်အတည်ပြုပြီးအစိုးရမှထုတ်လုပ်သည်။ အချို့သောကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းများသည်ယင်းအတွဲများကို 'ငွေကြေးလက်ဝါးကပ်တိုင်' ဟုခေါ်ကြသည်။
ဤအမျိုးအစားတွင်အများဆုံးရောင်းဝယ်သောအတွဲများထဲမှတစ်ခုမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် Bitcoin ဖြစ်သည် - BTC / USD အဖြစ်ပြသည်။ အခြားပေါ်ပြူလာအဖြစ်ဆုံးအတွဲများတွင် Bitcoin (GBP) ဗြိတိန်ပေါင်၊ ယူရို (ယူရို)၊ ဆွစ်ဖရန့် (CHF) နှင့်သြစတြေးလျဒေါ်လာတို့ဖြစ်သည်။
နောက်ထပ်ရှင်းပြရန်၊ သင်သည် BTC / AUS ကိုအရောင်းအဝယ်လုပ်ပြီး $ 68,545 ကိုကိုးကားပါက - Bitcoin ၁ ခုတိုင်းသည် ၆၈၅၄၅ ဒေါ်လာဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် BTC / EUR နှင့်သင်စျေးနှုန်းယူရို ၄၄,၅၄၇ ကိုရောင်းနေလျှင် - Bitcoin ၁ ခုတိုင်းသည် ၄၄၅၄၇ ယူရိုဖြစ်သည်။
သင်သည် သြစတြေးလျဒေါ်လာနှင့် Bitcoin အရောင်းအ၀ယ်လုပ်ရန် စိတ်ဝင်စားသည်။
ဤအတွဲကို BTC/AUD အဖြစ်ပြသမည်ဖြစ်ပြီး၊ သင့်ကို AU$67,749 ကိုးကားထားသည်။
ဤအတွဲ၏စျေးနှုန်းသည် တဟုန်ထိုးတက်လာမည်ကို သင့်တွင် ပြင်းထန်သောခံစားချက်ရှိသည် - ထို့ကြောင့် $500 ဝယ်ယူမှုပြုလုပ်ပါ။
ရက်အနည်းငယ်ကြာပြီး BTC/AUD သည် AU$ 77,234 ဖြစ်သည်။
AUD နှင့် ဆန့်ကျင်သည့် Bitcoin သည် တန်ဖိုး 14% တိုးလာသည် - ထို့ကြောင့် သင်၏ ခန့်မှန်းချက်သည် မှန်ကန်ပါသည်။
ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်, သင်ကနေရာ ရောင်းချ သို့မှသာ သင့်အမြတ်ငွေများ ရရှိနိုင်စေရန် အမိန့်ပေးလိုက်ပါ။
သင်မြင်သည့်အတိုင်း (BTC / AUD) စျေးနှုန်းများမြင့်တက်လာခြင်း (သင်ထင်သည်အတိုင်း) - သင်သည်အမြတ်အစွန်းဒေါ်လာ ၇၀ (ဒေါ်လာ ၅၀၀ + ၁၄%) ရရှိခဲ့သည်။
စတင်သူအများစုသည် crypto-fiat အတွဲများမှတစ်ဆင့် Bitcoin အရောင်းအ ၀ ယ်လုပ်ရန်ရွေးချယ်ခဲ့ကြောင်းမကြာသေးမီကဖော်ပြခဲ့သည်။ ယင်းအတွက် အကြောင်းရင်းမှာ အစိုးရမှထုတ်ပေးသော fiat ငွေကြေးတစ်ခုအပါအဝင် အခြားဒစ်ဂျစ်တယ်တစ်ခုပေါ်တွင်ရှိခြင်းထက် ၎င်းသည် အစိုးရမှထုတ်ပေးသော fiat ငွေကြေးအပါအဝင် တစ်စုံတစ်ခုအပေါ် တွေးခေါ်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့ပြောခဲ့သည့်အတိုင်း Bitcoin ကျဆင်းတော့မည်ဟု သင်ထင်ပါက၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးကိုလည်း တိုတိုတုတ်တုတ်ဖြစ်စေရန် ရွေးချယ်နိုင်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် Bitcoin အတွဲများကို မကြာခဏ ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။ CFDs - တိုတိုတုတ်တုတ်ပြောနေတာ။
Crypto Cross- Pairs
ဒီမတည်ငြိမ်သောပိုင်ဆိုင်မှုကိုရောင်းဝယ်ရန်နောက်ထပ်နည်းလမ်းတစ်ခုမှာအခြား cryptocurrency နှင့်နှိုင်းယှဉ်ခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်သည်။ ၎င်းကို crypto-cross pair တစုံ (တစ်ခါတစ်ရံ 'crypto-cross' အဖြစ်ရည်ညွှန်းသည်) ။ ဥပမာ Bitcoin ကို Ripple နှင့်လဲလှယ်ပါက BTC / XRP အဖြစ်ပြလိမ့်မည်။
BTC / XRP ကို ​​အသုံးပြု၍ ဥပမာကိုအောက်တွင်ကြည့်ပါ။
Cross pair BTC/XRP သည် 93,587 ဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့်၊ 1 Bitcoin တစ်ခုစီအတွက်၊ စျေးကွက်သည် သင့်အား 93,587 တန်ဖိုးရှိသော Ripple ကို ပေးလိမ့်မည်။
၎င်းသည်ရိုးရှင်းပါသည်။ မေးစရာမေးခွန်းကဒီအတွဲလိုက်ငွေလဲနှုန်းကမြင့်တက်လာမှာလား၊ ကျလိမ့်မည်လား။ မှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချဖို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကူညီဖို့နည်းလမ်းများစွာရှိပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်, အရေးအပါဆုံးအရာသည်သင်ရွေးချယ်ထားသော Bitcoin စျေးကွက်သို့သုတေသနများစွာပြုလုပ်ရန်ဖြစ်သည်။
Bitcoin ကိုဘယ်လိုကုန်သွယ်ရမလဲ - ရေတို၊ ရေရှည်လား။
ယခုကျွန်ုပ်တို့အခြေခံများအကြောင်းပြောဆိုခဲ့ကြပြီးသည့်နောက် Bitcoin ကိုမည်သို့တိုတောင်းနိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ဖုံးကွယ်ထားသင့်သည် နှင့် ရေရှည်။
Bitcoin CFD များ
CFDs သည်မည်သည့်ပစ္စည်းကိုမဆိုရေတိုအခြေခံဖြင့်ကုန်သွယ်ရန်အသုံးအများဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ Bitcoin CFDs ကဒီဂျစ်တယ်ငွေကြေး၏အစစ်အမှန်ကမ္ဘာစျေးနှုန်းကိုခြေရာခံသည် ပိုင်ဆိုင် က။
Bitcoin CFDs သည် Bitcoin အလွန်အမင်းတန်ဖိုးရှိပြီးစျေးနှုန်းကျဆင်းမှုကိုမြင်တော့မည်ဆိုပါကသင့်အားကုန်သည်တစ် ဦး အနေဖြင့်ခန့်မှန်းတွက်ချက်ခြင်းနှင့် 'တိုတိုသွားခြင်း' ကိုခွင့်ပြုသည်။ သင်၏အွန်လိုင်းပွဲစားမှတစ်ဆင့်အရောင်းအ ၀ ယ် ပြုလုပ်၍ ပြုလုပ်နိုင်သည်။
အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော Bitcoin CFD ဥပမာတစ်ခုကိုကြည့်ပါ။
သင်သည် Stellar နှင့် Bitcoin အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်နေပါသည်။
BTC/XLM စျေးနှုန်းသည် 114,322 ဖြစ်သည်။
သေချာပါတယ်၊ သင့် Bitcoin CFD ကိုလည်း 114,322 နဲ့ တန်ဖိုးရှိပါတယ်။
သငျသညျစုံတွဲလိမ့်မယ်ထင်လျှင် တက် တန်ဖိုးတစ်ခု - ဖန်တီးပါ ဝယ်ခြင်း သင်ရွေးချယ်ထားသော ကုန်သွယ်ပလပ်ဖောင်းတွင် မှာယူပါ။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, သင် pair တစုံလိမ့်မည်ဟုထင်လျှင် ကျ တန်ဖိုးတစ်ခု - ဖန်တီးပါ ရောင်းချ ကုန်သွယ်မှုပလပ်ဖောင်းပေါ်တွင်အမိန့်။
အကယ်၍ စုံတွဲသည် တက်လာသည် သို့မဟုတ် ကျသွားပါက၊ သင်၏ယူဆချက်နှင့်အညီ - သင်သည် ဤကုန်သွယ်မှုတွင် အမြတ်များလိမ့်မည်။
Bitcoin CFDs များကို မိနစ်၊ ရက်များ သို့မဟုတ် အချို့သောကိစ္စများတွင် ရက်သတ္တပတ်များအထိ ဖွင့်ထားလေ့ရှိသည်။ CFD များကို ဖွင့်ထားချိန် နည်းပါးလေလေ ပိုကောင်းလေဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် CFD ကုန်သွယ်မှုကို နေ့တိုင်းဖွင့်ထားသောကြောင့် နေ့ချင်းညချင်း ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုအခကြေးငွေကို ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်ပြီး အချို့သောဝန်ဆောင်မှုပေးသူများသည် ၎င်းကို 'လဲလှယ်မှုအခကြေးငွေ' အဖြစ်ရည်ညွှန်းကာ ပိတ်ရက်များတွင် အခကြေးငွေမှာ များသောအားဖြင့် အနည်းငယ်ပိုများသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
eToro ကဲ့သို့သောပွဲစားများတွင်သင်၏လောင်းကြေးနှင့်သြဇာကိုထည့်သောအခါနေ့ချင်းညချင်းပေးဆောင်ရမည်ကိုသင်မြင်လိမ့်မည်။ ဤသည်ကသင်၏သြဇာရှိသည့် CFD ကုန်သွယ်ရေးတွင်ညအိပ်ရန်ငွေမည်မျှပေးရသည်ကိုအတိအကျသိမြင်စေသည်။
Bitcoin Buy နှင့် Hold
ရေရှည်ကုန်သည်များသည် Bitcoin ကို ၀ ယ်ယူပြီးကိုင်ထားလေ့ရှိသည်။ ထို့ကြောင့်မဟာဗျူဟာ၏အမည်ကို 'Buy and Hold' ဟုခေါ်သည်။ အထူးသဖြင့် cryptocurrencies အတွက်၎င်းကို HODLing ဟုမကြာခဏရည်ညွှန်းလေ့ရှိသည်။ Ergo, သင် Bitcoin ကို ၀ ယ်ပြီးသိမ်းထားပါကသင်သည် 'Hodler' ဖြစ်သည်။
Hodlers သည်ပုံမှန်အားဖြင့် Bitcoin တွင်၎င်းတို့၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကိုမ ၀ င်ရောက်မှီနှစ်ပေါင်းများစွာတိုင်ပင်သည်။ ထိပ်တန်းအဆင့်သတ်မှတ်ထားသော Bitcoin ပေးသူ eToro တွင်သင်လုပ်နိုင်သည် ဝယ်ခြင်း Bitcoin တိုက်ရိုက် - ကော်မရှင်အခကြေးငွေတွင်လုံးဝဘာမှမပေးဆောင်ပါ။ ၎င်းကို ပေါင်းစပ်ကုန်သွယ်မှုအစုံမှတစ်ဆင့် လုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်ပြီး သင့်အား ပေးဆောင်မည်ဖြစ်သည်။ ပိုက်ဆံအိတ် Bitcoin မှတ်ပုံတင်ပြီးနောက်။
Bitcoin ကိုရေရှည်တွင်အရောင်းအဝယ်ပြုခြင်းဖြင့်စျေးကွက်အတွင်းတွင်ကာလတိုမတည်မငြိမ်မှုများကိုသင်ကိုယ်တိုင်စိုးရိမ်စရာမလိုတော့ပေ။ ၀ ယ်ခြင်းနှင့်ကိုင်ဆောင်ခြင်းမဟာဗျူဟာသည်နေ့စဉ်ဆန်းစစ်မှုပြုလုပ်ရန်လိုအပ်ချက်ကိုလည်းလျှော့ချနိုင်သည်။
eToro သည်ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေး ၁၆ ခုနှင့်ကုန်သွယ်မှု ၉၀ ကျော်ကိုလက်လှမ်းမီသည်။ ၎င်းတွင် crypto-cross အတွဲများသာမက BTC / USD ကဲ့သို့သော fiat-to-crypto အတွဲများနှင့်အခြားများစွာသောအခြားအရာများလည်းပါ ၀ င်သည်။
အပိုင်း 2: Bitcoin အမိန့်ကိုလေ့လာပါ
Bitcoin ကိုကုန်သွယ်ရန်သင်အလွန်မတည်ငြိမ်မှုကိုဆန့်ကျင်။ မုန်တိုင်းကိုကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်ရန်လိုအပ်သည်။ မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည့်အပြင်အချို့သောအမှာစာများသည်ကုန်သွယ်မှုတစ်ခုစီတိုင်းတွင်ရှိသောသင်၏ဆုံးရှုံးမှုများကိုလျှော့ချရန်သင့်အားကူညီနိုင်သည်။
ဝယ်ရန်နှင့်ရောင်းရန် - Bitcoin ကိုကုန်သွယ်ရန်အမိန့်များအခြေခံအကျဆုံးနှင့်စတင်ခြင်း။ ရိုးရိုးလေးပြောရမယ်ဆိုရင် Bitcoin ကိုတန်ဖိုးမထားလောက်အောင်မြင့်မားတဲ့စျေးနှုန်းပြောင်းလဲမှုကိုမြင်ရတော့မယ်လို့သင်ထင်ရင်၊ ဝယ်ခြင်း အမိန့်။ အကယ်၍ သင်၏အနေအထားမှထွက်ရန်အချိန်တန်လျှင်၎င်းကိုအသုံးပြုရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မည် ရောင်းချ အမိန့်။
သင် Bitcoin တန်ဖိုးအလွန်ကြီးနှင့်တစ်တွေ့ကြုံလိမ့်မည်ဟုထင်လျှင် လြော့ပေါ့စေ စျေးနှုန်းအတွက် - တစ် ဦး ကိုဖန်တီးပါ ရောင်းချ မင်းပွဲစားနဲ့မှာပါ သင်ငွေသားထုတ်ယူလိုပါကသင်နှင့်အတူဈေးကွက်မှထွက်သွားပါလိမ့်မည် ဝယ်ခြင်း အမိန့်။
Bitcoin ၏စျေးနှုန်းသည်တစ်စက္ကန့်တိုင်းပြောင်းလဲသွားသည်။ ထို့ကြောင့်ဖြစ်စဉ်တိုင်းအတွက်ဝင်ပေါက်နှင့်ထွက်ပေါက်မဟာဗျူဟာများထားရှိရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။
စျေးကွက်နှင့် စတင်၍ အကန့်အသတ်ဖြင့်သာသင်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောရှင်းပြချက်ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။
အွန်လိုင်းပွဲစားများတွင်ရာထူးတစ်ခုထည့်သောအခါ 'စျေးကွက်အမိန့်' ကိုပုံမှန်သတ်မှတ်သည်။ ဤမူလတန်းအမိန့်သည်သင်၏ပွဲစားအားသင် Bitcoin ၏လက်ရှိစျေးကွက်ပေါက်စျေးကိုကြိုက်နှစ်သက်ပြီးသင်၏အမိန့်ကိုချက်ချင်းလုပ်ဆောင်စေလိုကြောင်းပြောပြသည်။
အထူးသဖြင့်, Bitcoin ၏စျေးနှုန်းအတွက်စဉ်ဆက်မပြတ်အပြောင်းအလဲကြောင့် - သင်အခါသင်မြင်စျေးနှုန်း တည်ဆောက်သည် အမိန့်နှင့်သင်တ ရယူ ကွဲပြားလိမ့်မည်။
သင့်အား BTC/USD တွင် $53,427 ကိုးကားထားသည်။
အဲဒီဈေးနဲ့ ကျေနပ်လို့ စျေးကွက်မှာ အော်ဒါတင်ပါ။
ကုန်သွယ်မှုပလပ်ဖောင်းသည် သင့်အမှာစာကို ချက်ချင်းလုပ်ဆောင်သည်။
သင်အမှာစာကိုစစ်ဆေးပြီးစျေးနှုန်းသည် $ 53,428 ဖြစ်သည်။
ဤကွာဟမှုသည် မိနစ်ပိုင်းဖြစ်သော်လည်း အဆက်မပြတ်နီးပါး ဈေးနှုန်းအပြောင်းအလဲကြောင့် ရှောင်လွှဲ၍မရပါ။
Bitcoin ဈေးကွက်သို့ ၀ င်ရောက်ရန်နောက်တစ်နည်းမှာ 'limit-order' ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်။ ဤသည်ကသင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင် entry ကိုစျေးနှုန်းရွေးချယ်ဖို့နိုင်ပါတယ်။
Bitcoin သည် $53,427 ရှိပြီး သင်ဝယ်ယူမှုပြုလုပ်ရန် စိတ်အားထက်သန်ပါသည်။
သို့သော်၊ သင်သည် $57,200 အထိ တက်လာသည်အထိ စျေးကွက်ထဲသို့ ၀င်ရန် စိတ်မဝင်စားပါ။
ထို့ကြောင့်၊ သင်၏အမှာစာမှာယူသောအခါတွင် သင်သည် သင်၏ကန့်သတ်အမှာစာကို $57,200 သို့ သတ်မှတ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။
Bitcoin သည်ဒေါ်လာ ၅၇,၂၀၀ အထိမြင့်တက်လာပါကသင်၏ကန့်သတ်ချက်ကိုသင်၏ပွဲစားမှပြုလုပ်လိမ့်မည်။ အရေးကြီးသည်မှာ၊ အမှာစာသည်ဤစျေးနှုန်းကိုမရောက်မချင်းသို့မဟုတ်သင်ပယ်ဖျက်သည့်တိုင်အောင်ဆက်လက်တည်ရှိလိမ့်မည်။
Stop-Loss အမိန့်များနှင့် Take- အမြတ်အမိန့်
ကျနော်တို့ဘယ်လိုဖုံးလွှမ်းပါတယ် ဝင်ရောက် Bitcoin ကုန်သွယ်ရန်ရွေးချယ်သောအခါစျေးကွက်, ဒါကြောင့်ယခုငါတို့သင်၏အကြောင်းပြောဆိုနိုင်ပါတယ် ထွက်ပေါက် မဟာဗျူဟာ။ ထွက်ပေါက်အစီအစဉ်ရှိခြင်းသည်အစီအစဉ်မသွားသောကုန်သွယ်မှုအတွက်ငွေအလွန်များများဆုံးရှုံးခြင်းကိုရှောင်ရှားရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, Bitcoin ကုန်သွယ်မှုသင်တို့အဘို့မျှော်လင့်ထားထက်ဆန့်ကျင်ဘက် ဦး တည်သွားလာရန်အစဉ်အမြဲရှိပါတယ်။
'Stop-loss' အမိန့်များကိုပုံစံအမျိုးမျိုးနှင့်အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးသောကုန်သည်များကအသုံးပြုသည်။ ရိုးရိုးလေးပြောရရင်ကုန်သွယ်မှုတိုင်းမှာဒီအမိန့်ကိုထည့်သွင်းခြင်းအားဖြင့်၊ သင့်ရဲ့ဆုံးရှုံးမှုကိုသတ်သတ်မှတ်မှတ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲရပ်တန့်သွားစေနိုင်တယ်။ သင်လုပ်ချင်တာကသင်လုပ်ချင်တာထက်ပိုပြီးမဆုံးရှုံးနိုင်အောင်တားဆီးဖို့ဖြစ်တယ်။
Stop-loss order သည်သင်၏ Bitcoin ကုန်သွယ်မှုအားကြီးမားသောဆုံးရှုံးမှုများမှမည်သို့ကာကွယ်နိုင်သည်ကိုအောက်တွင်ဥပမာတစ်ခုကြည့်ပါ။
မင်း အရောင်းအဝယ်လုပ်တယ်။ Bitcoin ဗြိတိန်ပေါင်နှင့်ဆန့်ကျင်။
BTC / GBP ကိုပေါင် ၃၈,၀၉၅ ဖြင့်စျေးနှုန်းသတ်မှတ်ထားပြီး၊ ဝယ်ခြင်း အမိန့်။
ဤကုန်သွယ်မှုတွင် 3% ထက်ပို၍ မဆုံးရှုံးချင်ပါ။
ထို့ကြောင့်၊ Stop-loss order ကို ၃% သတ်မှတ်သည်။ အောက်တွင် entry ကိုစျေးနှုန်း။
သင်အစားတိုတိုသွားနှင့်နေရာချလျှင် ရောင်းချ order - Stop-loss order ကို ၃% သတ်မှတ်သည်။ အထက် entry ကိုစျေးနှုန်း။
Stop-loss အမိန့်အလိုအလျောက်နေကြသည်။ သင်သည်သင်၏အမှာစာကိုချပြီးသည်နှင့်တပြိုင်နက်သင်ထိုင်။ ထိုင်။ Bitcoin စျေးနှုန်းတက်လာမည်သို့မဟုတ်ကျလိမ့်မည်ကိုစောင့်ဆိုင်းနိုင်သည်။ ကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းသည်ပစ္စည်းတန်ဖိုးကျဆင်းသွားသည်နှင့်အမြန်ဆုံးသင်၏အရှုံးများကိုရပ်တန့်ရန်သင်၏အမိန့်ကိုလုပ်ဆောင်လိမ့်မည်။
Bitcoin အရောင်းအ၀ယ်လုပ်နည်းကိုလေ့လာရန်ရှာဖွေနေချိန်တွင်နောက်ထပ်အသုံးဝင်သောအမှာစာမှာ 'အမြတ်အစွန်းရယူခြင်း' အမှာစာဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် အထက်ဖော်ပြပါ ရပ်တန့်ဆုံးရှုံးမှုအမိန့်နှင့် နှိုင်းယှဉ်နိုင်သောကြောင့် ဤအရာသည် အနည်းငယ်ရှင်းပြလိုပါသည်။ သိသာထင်ရှားသော ခြားနားချက်မှာ ရပ်တန့်-အရှုံး အမိန့်များသည် သင်၏ ဆုံးရှုံးမှုများကို လက်ထဲမှ မထွက်အောင် တားဆီးခြင်းဖြစ်သည် - အမြတ်အစွန်းယူသော အမိန့်များသည် သင်၏ အမြတ်များထဲတွင် သော့ခတ်နေပါသည်။
ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်, ယူ - အမြတ်အမိန့်သင်သည်သင်၏ Bitcoin ကုန်သွယ်မှုကိုပိတ်လိုက်နှင့်သင်၏အမြတ်အစွန်းထုတ်ငွေလိုချင်တဲ့စျေးနှုန်းအမှတ်မှာသင်၏ပွဲစားကိုပြောပြသည်။
မင်းရဲ့ 6% က မင်းလိုချင်တယ်။ Bitcoin ကုန်သွယ်ရေး။
ထိုကဲ့သို့သောကဲ့သို့သင်တစ် ဦး နှင့်အတူဝင်လျှင် ဝယ်ခြင်း အမှာစာ - သင်အမြတ်ယူမှုကို ၆% တွင်ထားသင့်သည် အထက် entry ကိုစျေးနှုန်း။
သင်တစ် ဦး နှင့်အတူစျေးကွက်ဝင်လျှင် ရောင်းချ အမှာစာ - သင်သည်အမြတ်ယူခြင်းကို ၆% ဖြင့်နေရာချသင့်သည် အောက်တွင် entry ကိုစျေးနှုန်း။
အထက်ပါဥပမာမှသိသာသည်အတိုင်း၊ Bitcoin ၏စျေးနှုန်းသည်မည်သည့်လမ်းဖြင့်သွားသည်ဖြစ်စေအမြတ်အစွန်းရှိဆုံးရှုံးမှုများ / သော့ခတ်ခြင်းကိုရပ်တန့်ရန်သင့်တွင်အမိန့်ရှိသည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ပွဲစားမှသင်ညွှန်ကြားသည့်စျေးနှုန်းဖြင့်ထိုရာထူးကိုအလိုအလျောက်ပိတ်လိမ့်မည်။
အပိုင်း 3: Bitcoin အန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှုလေ့လာပါ
အစပြုသူများအတွက် Bitcoin ကိုမည်သို့ရောင်းဝယ်ရမည်ကိုလေ့လာခြင်း၏အရေးကြီးဆုံးအပိုင်းတစ်ခုမှာစွန့်စားမှုစီမံခန့်ခွဲမှုအားနားလည်ခြင်းဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့ထိတွေ့ခဲ့သည့်အတိုင်း Bitcoin သည်အထူးသဖြင့်မတည်ငြိမ်သောပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ Ergo၊ သင်ပြင်ဆင်ထားလေလေ၊ သင်၏ကုန်သွယ်မှုအကျိုးအမြတ်အတွက်ပိုကောင်းလေဖြစ်သည်။ သင်ကြိုးစားပြီးသည်နှင့်သင်ကြိုးစားပြီးသောငွေရရှိခြင်းကိုစွန့်စားသည်။
အတိုချုပ်ပြောရရင်၊ အန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှုနည်းဗျူဟာများသည်ကုန်သွယ်ရေးမတိုင်မီနှင့်ကာလအတွင်းသင်ကိုယ်တိုင်အတွက်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်သတ်မှတ်ချက်များပါ ၀ င်သည်။ သင်၏လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီမည့်နည်းဗျူဟာတစ်ခုကိုဖန်တီးရန် Bitcoin ကိုမည်သို့ကုန်သွယ်ရမည်ကိုလေ့လာရန်အချိန်ရောက်လာသည့်အခါလှုံ့ဆော်မှုအချို့အတွက်အောက်တွင်ကြည့်ပါ။
Bankroll စီမံခန့်ခွဲမှု Bitcoin
Bitcoin bankroll စီမံခန့်ခွဲမှုသည်အဆင့်အမျိုးမျိုးရှိကုန်သည်များကမကြာခဏအသုံးပြုသောနည်းဗျူဟာဖြစ်သည်။ ဤစနစ်ကိုပိုမိုလွယ်ကူစေရန် - ရာခိုင်နှုန်းဖြင့်အလုပ်လုပ်ပါ။
အစုရှယ်ယာတစ်ခုစီကို 3% ကန့်သတ်ရန် သင်ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။
ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်သင်၏ကုန်သွယ်မှုအကောင့်တွင်ဒေါ်လာ ၁၀၀ သို့မဟုတ် ၁၀၀၀၀၀ ရှိမရှိနှင့်မသက်ဆိုင်သောကြောင့်ရာထူးတစ်ခုတွင် ၃% သာသင်စွန့်စားနိုင်သည်။
ထို့ကြောင့်သင့်တွင်ဒေါ်လာ ၃၀၀၀ ရှိလျှင် - ဒေါ်လာ ၉၀ ထက်မပိုပါနှင့်။
သင့်တွင်ဒေါ်လာ ၁၀၀၀ ကျန်ပါကဒေါ်လာ ၃၀ ထက်မပိုပါနှင့်။
ဤစနစ်သည်သင် Bitcoin ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားရာတွင်မည်မျှအတွေ့အကြုံရှိပါစေသင်၏မဟာဗျူဟာကိုထည့်သွင်းရန်အလွန်လွယ်ကူသည်။ အော်ဒါမှာယူမှုတစ်ခုချင်းစီမတိုင်မီလျင်မြန်စွာတွက်ချက်မှုတစ်ခုကိုပြုလုပ်ပါ။ ထိုအချိန်တွင်သင်၏ကုန်သွယ်မှုအကောင့်ချိန်ခွင်လျှာကို အခြေခံ၍
စွန့်စားရမှုနှင့်ဆုများအချိုးအစားမဟာဗျူဟာကိုအလွယ်တကူရနိုင်သည်။ Bitcoin ရောင်းဝယ်ဖောက်သောအခါသင်မည်မျှရလိုသည်ကိုစဉ်းစားပါ။ ၎င်းကိုသင်စွန့်စားလိုစိတ်မည်မျှရှိသည်။
သင်လောင်းကြေး $1 တိုင်းအတွက်၊ သင်သည် 2$ ပြန်ရလိုသည်ဟု ဆိုကြပါစို့။
၎င်းသည် 1:2 စွန့်စားမှု/ဆုလာဘ် ဗျူဟာတစ်ခုဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် သင်သည် $200 ရှယ်ယာထည့်ပါက- အမြတ် $400 ရရှိရန်မျှော်လင့်ပါသည်။
အကယ်၍ သင်သည် Bitcoin အနေအထားတစ်ခုတွင် $1,000 ကိုစွန့်စားပါက- သင်သည် $2,000 အမြတ်ရရှိမည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။
အထက်ဖော်ပြပါ stop-loss နှင့်ယူ - အမြတ်အမိန့်သည်ဤနည်းဗျူဟာကို၎င်း၏အပြည့်အဝအသုံးချဘို့တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သောဖြစ်ကြသည်။
သတိမထားမိသောသူများအတွက်မူသင်၏အကောင့်လက်ကျန်ငွေကခွင့်ပြုထားသည်ထက် Bitcoin ကိုသင်ကုန်သွယ်နိုင်သည်။ သြဇာကိုအများအားဖြင့်အချိုး (သို့) မျိုးစုံအဖြစ်သရုပ်ဖော်ပြီး Bitcoin CFDs နှင့်အတူနာမည်အကြီးဆုံးပွဲစားများကကမ်းလှမ်းသည်။
သင့်ကုန်သွယ်မှုအကောင့်တွင် လက်ရှိတွင် $1,000 ရှိသည်။
သင်တစ် ဦး နေရာချဆုံးဖြတ် ဝယ်ခြင်း BTC/EUR တွင်မှာယူပါ။
ကုန်သွယ်မှုပလပ်ဖောင်းသည် သင့်အား 1:2 လွှမ်းမိုးမှုကိုပေးသည်။
၎င်းသည် သင်၏ $1,000 ရှယ်ယာကို $2,000 သို့ ပြောင်းလဲပေးပါသည်။
သင်မြင်သည့်အတိုင်းသင်၏ရှယ်ယာနှစ်ဆကိုတိုးမြှင့်ခြင်းသည်ပင်သင်၏အမြတ်အပေါ်များစွာအကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်။ ပြproblemနာကဒီဟာကိုနှစ်ဖက်စလုံးကထားလို့ရတယ်။ ဆိုလိုသည်မှာသြဇာတစ်ခုသည်သင့်အားသင်၏အကျိုးအမြတ်ကိုချီးမြှင့်ရန်အခွင့်အရေးပေးသည်ဆိုသော်လည်းကံမကောင်းအကြောင်းမလှစွာဖြင့်အရာများသည်အခြားတစ်ဖက်သို့သွားလျှင်သင်၏ဆုံးရှုံးမှုများကိုလည်းမြှင့်တင်ပေးနိုင်သည်ဟုဆိုလိုသည်။
အရေးကြီးသည်မှာ CFDs ကို US တွင်ဥပဒေအရတားမြစ်ထားသည်။ သင်သည်အမေရိကန်မှဖြစ်လျှင်၊ Bitcoin CFDs များကိုသင်မရရှိနိုင်ဟုဆိုလိုသည်။ ဗြိတိန်ကုန်သည်များသည် Bitcoin သို့မဟုတ်အခြား cryptocurrency ပေါ်တွင် leveraged CFDs များကိုရယူနိုင်သည်။
အချို့သောတရားစီရင်မှုများသည်ကန့်သတ်ချက်မရှိပဲသြဇာကိုခွင့်ပြုသည်။ ထို့ကြောင့်သင်နေထိုင်ရာနေရာတွင်သင်ရရှိနိုင်သောအရာများကိုသုတေသနပြုပါ။ သင်က Bitcoin ပံ့ပိုးပေးသူနှင့်ညှိနှိုင်းနေကြောင်းသေချာစေရန်လည်းအကြံပြုလိုပါတယ်။ စည်းမျဉ်းမရှိသောနေရာအချို့သည် ၁း၅၀၀ အထိရှိနိုင်သည်။ သင်၏တိုင်းပြည်တွင်တရားဝင်ဖြစ်မည်မဟုတ်ပေ။
အပိုင်း ၄: Bitcoin စျေးနှုန်းများကိုမည်သို့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရမည်ကိုလေ့လာပါ
အပိုင်း ၁-၃ ကိုပြီးစီးပြီးနောက်သင်သည် Bitcoin ကိုမည်သို့ကုန်သွယ်ရမည်နှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုသဘောပေါက်သင့်သည်။ သင်ယူမှု၏ကြီးမားသောအစိတ်အပိုင်းမှာအမှာစာအမျိုးအစားများကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်သော်လည်းစျေးနှုန်းများကိုမည်သို့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရမည်ကိုနားလည်ရန်လည်းအရေးကြီးသည်။
နောက်ဆုံးတွင်သင်၏ဆုံးဖြတ်ချက်အများစုနှင့်မျှော်လင့်သောအမြတ်အစွန်းများသည် Bitcoin ၏တန်ဖိုးလမ်းကြောင်းအပေါ်သင်၏ယူဆချက်ကိုအခြေခံလိမ့်မည်။
အခြေခံခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းကိုလေ့လာခြင်းသည် Bitcoin ၏စျေးနှုန်းကိုအကျိုးသက်ရောက်စေမည့်စီးပွားရေးနှင့်ဘဏ္newsာရေးသတင်းများနှင့်ရင်ပေါင်တန်းနိုင်ရန်လိုအပ်သည်။
ဒစ်ဂျစ်တယ်ဒင်္ဂါးပြားများနှင့် စျေးကွက်အရင်းအနှီးများကို ယှဉ်ပြိုင်ခြင်း။
အကြောက်တရား လွှမ်းမိုးနေသော မီဒီယာ ခေါင်းကြီးပိုင်းများ။
Bitcoin တူးဖော်ခြင်း ဆုလာဘ်များ။
ဥပဒေရေးရာနှင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ (သို့မဟုတ်) မရှိခြင်း။
အကယ်၍ ၎င်းသည်စောင့်ကြည့်ရန်အလွန်များလွန်းနေပါက Bitcoin subscription service အတွက်စာရင်းသွင်းရန်သင်စဉ်းစားနိုင်သည်။ ဤနည်းအားဖြင့်သင်ကုန်သွယ်နေသည့်ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ပတ်သက်သည့်အချိန်နှင့်တပြေးညီနောက်ဆုံးသတင်းများနှင့်သတင်းများကိုသင်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
သတင်း ၀ န်ဆောင်မှုများသည်စျေးကွက်ကိုပိုမိုလွယ်ကူစေရန်ပြုလုပ်ပေးသည်မှာသေချာသည်။ ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်, သင်သည်သင်၏ Bitcoin ကုန်သွယ်ကြိုးပမ်းမှုကနေအမြတ်အစွန်းစေရန်ပိုများပါတယ်။
နည်းပညာဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းသည်စျေးကွက်စိတ်ဓာတ်ကိုအတိတ်နှင့်ပစ္စုပ္ပန်မှအကဲဖြတ်ရန်စျေးနှုန်းအချက်အလက်များအသုံးပြုခြင်းပါ ၀ င်သည်။ ဤသည်မှာ Bitcoin လမ်းကြောင်းသစ်ကိုမည်သည့်နေရာတွင်စတင်မည်၊ အဆုံးသတ်မည်ဆိုသည်ကိုအလင်းပေးသည်။
ထိုကဲ့သို့သောဇယားများကိုအသုံးချခြင်းသည်သင်၏ Bitcoin အရောင်းအဝယ်ဆုံးဖြတ်ချက်များကိုရှေ့သို့တိုးတက်ရန်လွယ်ကူစေသည်။ အသုံးအများဆုံးအညွှန်းကိန်းများမှာနှိုင်းယှဉ်ကြံ့ခိုင်မှုညွှန်းကိန်း၊ MACD ညွှန်းကိန်းများ၊ ရွေ့လျားပျမ်းမျှပျမ်းမျှနှင့်ပျမ်းမျှ ဦး တည်ရာညွှန်းကိန်းများဖြစ်သည်။ သို့သော်များစွာသောအရာများစွာရှိပါသည်။
နည်းပညာဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၏ရှုပ်ထွေးမှုကိုအပြည့်အဝနားမလည်သေးသူများအတွက် - သင် Bitcoin များကိုအချက်အလက်များမှတစ်ဆင့်မည်သို့ရောင်းဝယ်ရမည်ကိုလေ့လာလိုပေမည်။
Bitcoin အချက်ပြမှုများကိုအတွေ့အကြုံရှိသူများမှ ဖန်တီး၍ ကုန်သွယ်ရေးအချက်အလက်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုသို့စာရင်းသွင်းပြီးမည်သည့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုမျိုးကိုမဆိုပြုလုပ်ရန်မလိုအပ်တော့ပါ။ အဲဒီအစား၊ သင်ကသင့်တော်မယ်ဆိုရင်သင့်တော်တဲ့အမိန့်ကိုသာထားရှိရပါမယ်။
Buy or Sell ။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ stop-loss စျေးနှုန်း။
ဒီနေရာမှာလေ့လာပါ2ကုန်သွယ်ရေးမှာကျွန်တော်တို့ဟာအမှိုက်ပုံတွေပါ crypto အချက်ပြမှုများ - သင့်အားနာရီပေါင်းများစွာသုတေသနပြုခြင်း
အပိုင်း ၅: Bitcoin ပွဲစားကိုဘယ်လိုရွေးချယ်ရမယ်ဆိုတာလေ့လာပါ
Bitcoin ကိုကုန်သွယ်ရန်မှန်ကန်သောပံ့ပိုးသူကိုရွေးချယ်ခြင်းသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကုန်သွယ်ရေးနယ်ပယ်ရှိရာနှင့်ချီသောအွန်လိုင်းပွဲစားများကိုသုတေသနပြုပြီးစိစစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စာဖတ်သူများအတွက်အကောင်းဆုံးပလက်ဖောင်းများကိုရှာဖွေရန်မက်ထရစ်၏ရက်စက်သောစစ်ဆေးရမည့်စာရင်းတွင်ဤသည်မှာလိုက်သည်။
သင်၏ကိုယ်ပိုင်သုတေသနကိုလုပ်ဆောင်ရန်အချိန်ကုန်လာသောအခါသင်၏အချိန်နှင့်ထိုက်တန်သော Bitcoin အရောင်းအ ၀ ယ်ပလက်ဖောင်းတစ်ခုကိုရှာဖွေရန်ကြိုးပမ်းမှုဖြင့်သင်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောကျွန်ုပ်တို့၏စစ်ဆေးရမည့်စာရင်းကိုစစ်ဆေးနိုင်သည်။
အထူးသဖြင့် cryptocurrencies အရောင်းအဝယ်လုပ်သောအခါစည်းမျဉ်းများမရှိခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်သင့်သည်။ ဤနေရာများကိုဟက်ခံရခြင်းကြောင့်ကျော်ကြားသည်။ ထို့အပြင်ပွဲစားသည်နောက်ကျလွန်းသည်ကိုတရားဝင်မသိသည်ကိုသင်မသိပါ။
အကျင့်ယိုယွင်းမှု၊ ခိုးမှုနှင့်လိမ်လည်မှုကိုရှောင်ရှားရန် - သင်ကထိန်းချုပ်ထားသော Bitcoin ပံ့ပိုးသူနှင့်သာမှတ်ပုံတင်ရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။ သတိမထားမိသောသူများအတွက်ကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းသည်၎င်း၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်တွင်လိုင်စင်နံပါတ်ပြသလိမ့်မည်ကိုသင်သိလိမ့်မည်။
ကုန်သွယ်မှုနေရာများတွင် အတွေ့ရများဆုံးသော စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့များမှာ၊ FCA (ယူကေ)၊ ASIC (သြစတေးလျ)၊ Android (စင်္ကာပူ)၊ CySEC (ဆိုက်ပရပ်စ်) နှင့် FINRA (အမေရိကန်)။ နောက်ထပ် လက်တစ်ဆုပ်စာ ရှိပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေကို သင်ရွေးချယ်ထားတဲ့ ပွဲစားခမှာ သင်မြင်ရရင် သင်ဟာ ဘေးကင်းတဲ့ လက်ထဲမှာ ရှိနေတယ်ဆိုတာ သင်သိပါတယ်။
စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းသတ်မှတ်ထားသောပွဲစားများအားလုံးသည်ဘဏ္authoritiesာရေးအာဏာပိုင်များမှချမှတ်ထားသောအလျှော့မပေးသောစည်းမျဉ်းများစာရင်းကိုလိုက်နာရမည်။ ၎င်းတွင်အခကြေးငွေပွင့်လင်းမြင်သာမှု၊ သုံးစွဲသူရန်ပုံငွေခွဲခြားခြင်း၊ မကြာခဏနှင့်အသေးစိတ်စစ်ဆေးခြင်းနှင့်အခြားအရာများပါဝင်သည်။ ၎င်းသည်အွန်လိုင်းအကျိုးဆောင်နေရာကိုလူတိုင်းအတွက်သန့်ရှင်းသပ်ရပ်စွာထိန်းသိမ်းထားသည်။
ဘီးများရွေ့လျားနေစေရန်နှင့်ဖောက်သည်သန်းပေါင်းများစွာကိုနေ့စဉ်အရစ်ကျ ၀ န်ဆောင်မှုပေးရန်အတွက် - Bitcoin ပံ့ပိုးသူများသည်ကုန်သွယ်ခနှင့် / သို့မဟုတ်ကော်မရှင်များအားကောက်ခံလိမ့်မည်။
အောက်တွင် မကြာခဏမြင်တွေ့နေရသော အချို့ကိုကြည့်ပါ။ ကုန်သွယ် Bitcoin အခကြေးငွေ။
ကော်မရှင်သည်သင်၏ Bitcoin အနေအထားအရွယ်အစားပေါ် မူတည်၍ ရာခိုင်နှုန်းအဖြစ်သတ်မှတ်သည်။
သင့်ပွဲစားက ကော်မရှင်ခ 1% သတ်မှတ်သည်ဆိုပါစို့။ Bitcoin စျေးကွက်သို့ဝင်ရောက်သောအခါတွင်၎င်းကိုပေးဆောင်လိမ့်မည်။ နှင့် ထွက်ခွာသည်။
ထို့ကြောင့်သင်သည်ဒေါ်လာ ၁၀၀၀ တန် Bitcoin အနေအထားကိုဖွင့်လျှင်စျေးသို့ ၀ င်ရန်အတွက်ဒေါ်လာ ၁၀ ဒေါ်လာပေးရမည်။
အကယ်၍ သင်၏ရာထူးသည်ကုန်သွယ်မှုပိတ်ချိန်တွင်ဒေါ်လာ ၁၆၀၀ တန်လျှင် - သင်သည် ၁၆ ဒေါ်လာပေးလိမ့်မည်။
အချို့သောအွန်လိုင်းပွဲစားများသည်ကုန်သွယ်မှုတစ်ခုစီအတွက် ၂% အထိသတ်မှတ်ပေးသည်။ သင်တွေးမိသည့်အတိုင်းမကြာမီဤအခကြေးငွေများသည်သင်၏အမြတ်အစွန်း၌ပျောက်ကွယ်သွားနိုင်သည်။
လူကြိုက်များသောအွန်လိုင်းအကျိုးဆောင် eToro သည် Bitcoin ကိုကော်မရှင်မှအခမဲ့ကုန်သွယ်ခွင့်ပြုသည်။ ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်, အထက်ပါကုန်သွယ်ရေးအပေါ်, သင်သည်သင်၏နောက် Bitcoin ကုန်သွယ်ရေးဆီသို့ $ 26 ကိုကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မယ်!
အဆိုပါ ပျံ့နှံ့ ကုန်သွယ်မှုအားလုံးတွင် လက်ရှိကွာခြားချက်ဖြစ်သည်။ ဝယ်ခြင်း စျေးနှုန်းနှင့် ရောင်းချ Bitcoin ၏စျေးနှုန်း။ ဤပြန့်ပွားမှုသည်စျေးကွက်စိတ်ဓာတ်နှင့်မသက်ဆိုင်သောအမြတ်အစွန်းကိုလှည့်ပတ်သွားစေသည်။
စဉ်းစားကြည့်ရအောင် ဝယ်ခြင်း Bitcoin ၏စျေးနှုန်းသည် $ 47,765 ဖြစ်သည်။
အဆိုပါ ရောင်းချ စျေးနှုန်းက $48,142 ဖြစ်ပါတယ်။
အမြန်တွက်ချက်မှုတစ်ခုက ၎င်းသည် ပျံ့နှံ့မှု 0.79% နှင့် ညီမျှကြောင်း ပြသသည်။
ထို့ကြောင့် သင်သည် သင်၏ကုန်သွယ်မှု 0.79% ကို အနီရောင်ဖြင့် စတင်နေပါသည်။
အထက်ပါနှုန်းအတိုင်း, ဒီဂျစ်တယ်အကြွေစေ့အားဖြင့်တန်ဖိုးမြင့်တက်လျှင် ကျော်လွန် ၀.၇၉%၊ သင်၏ကုန်သွယ်မှုသည်အမြတ်အစွန်းဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ Bitcoin လမ်းညွှန်အားမည်သို့လေ့လာသည်ကိုလေ့လာသည်အသစ်သောပွဲစားများသည်သင့်အားသင်၏ငွေစာရင်းသို့ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းများဖြင့်ငွေသွင်းနိုင်သည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။
အမြန်ဆန်ဆုံးနှင့် အဆင်ပြေဆုံး ငွေပေးချေမှုအမျိုးအစားများမှာ ခရက်ဒစ်နှင့် ဒက်ဘစ်ကတ်များအပြင် အီး-ပိုက်ဆံအိတ်များဖြစ်သည်။ မျဉ်းကြောင်းများတစ်လျှောက် စဉ်းစားပါ။ PayPal က, Netellerနှင့် Skrill အဆုံးစွန်သောအဘို့။
သင်၏ Bitcoin ပံ့ပိုးသူအနေဖြင့်လုပ်ဆောင်ရန်အနှေးဆုံးငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းသည်အမြဲတမ်းဘဏ်ငွေလွှဲလွှဲပြောင်းမှုဖြစ်လိမ့်မည်။ ၎င်းသည်နှစ်ရက်မှတစ်ပတ်အတွင်းမည်သည့်နေရာတွင်မဆိုယူနိုင်သည်။
Bitcoin အွန်လိုင်းရောင်းဝယ်ဖောက်ကားရန် အကောင်းဆုံးပွဲစား
အဲဒါကို စိတ်ထဲမှတ်ထားပြီး၊ ငါတို့က မင်းကို online legwork တွေ အများကြီး ကယ်တင်လိုက်ပြီ။ ယနေ့အွန်လိုင်းတွင် Bitcoin ကုန်သွယ်မှုပြုလုပ်ရန် ကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံးပွဲစားကို အောက်တွင်ကြည့်ပါ။
AVATrade - Bitcoin CFD များကို ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားပြီး နည်းပညာဆိုင်ရာ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု၏ အစုအဝေးများကို ရယူပါ။
AvaTrade သည် Bitcoin အရောင်းအ ၀ ယ်တွင်အလွန်လူသိများသည်။ စင်စစ်အားဖြင့်အွန်လိုင်းပွဲစားသည်မတူညီသောကုန်သည်များပင်လယ်ပြင်ကိုကူညီပံ့ပိုးပေးနေသည်မှာဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကျော်ပြီဖြစ်သည်။ ဤကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းသည်အလောင်းကောင်များစွာမှသတ်မှတ်ထားသောတင်းကြပ်သောလိုက်နာမှုလိုအပ်ချက်များအောက်တွင်အလုပ်လုပ်သည်။ ၎င်းတွင် FCA၊ ASIC၊ MiFID၊ JFSA၊ PFSA, BVI, FRSA, FSCA, IIROC နှင့် ADG တို့ပါ ၀ င်သည်။
ဤထိပ်တန်းပွဲစားသည်ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာပိုင်ဆိုင်မှုများစွာကိုရယူနိုင်သည်။ ၎င်းတွင် BTC / USD၊ BTC / JPY နှင့် BTC / EUR စသည့် crypto-fat အတွဲများပါဝင်သည်။ ထိုသို့သောအတွဲများကို CFDs များအဖြစ်အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်မည်ဖြစ်သဖြင့်ညအိပ်ရန်ငွေကြေးကိုသာသတိရပါ။ သငျသညျအပြောင်းအရွေ့အပေါ်ဝယ်ခြင်းနှင့်ရောင်းလိုလျှင်, ပွဲစား၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် app ကို AvaTrade GO ရှိသည်။ ဒီအက်ပလီကေးရှင်းမှာထူးခြားတဲ့ပညာရေးဆိုင်ရာပစ္စည်းများနှင့်ကုန်သွယ်ရေးကိရိယာများရှိသည်။
ဤတွင်အကောင့် Simulator မြား, သရုပ်ပြ, အလိုက်အထိုက်နေတတ်တဲ့ဇယား, ကုန်သွယ်ရေးလမ်းညွှန်များနှင့်ထို့ထက်ပို။ ပါဝင်သည်။ ထို့အပြင် AvaTrade သည် MT4 နှင့် MT5 နှင့်အပြည့်အဝသဟဇာတဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်လူမှုရေးအရအခြား Bitcoin ကုန်သည်များထံမှထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုရလိုလျှင်သင်၏ကုန်သွယ်မှုအကောင့်ကို DupliTrade သို့မဟုတ် Zulutrade နှင့်ချိတ်ဆက်ချင်ပေမည်၊ ထိုတွင်သင်သည်အခြားကုန်သည်များ၊ မဟာဗျူဟာများနှင့်မွမ်းမံမှုများအပေါ် 'နှစ်သက်'၊ ။
၎င်းသည် လက်တွေ့ကျကျ အတွေ့အကြုံများစွာဖြင့် သက်တမ်းရင့် ကုန်သည်များထံမှ စျေးကွက်တွင်း အဝင်အထွက်များကို ဗျူဟာကျကျ လေ့ကျင့်ရန် ကောင်းမွန်သော နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဖောက်သည်အများစုသည် ခရက်ဒစ်နှင့် ဒက်ဘစ်ကတ်များအပြင် ဘဏ်ငွေလွှဲမှုများကို အသုံးပြု၍ ရန်ပုံငွေများကို အပ်နှံနိုင်သည်။ အီးယူနှင့် သြစတြေးလျတို့ မပါဝင်သော်လည်း အချို့သော Neteller ကဲ့သို့သော အီး-ပိုက်ဆံအိတ်များကို အသုံးပြုနိုင်မည် ဖြစ်သည်။ အနည်းဆုံး စပေါ်ငွေ $100 ဖြင့် စတင်နိုင်ပါသည်။
အနည်းဆုံး $ 100 အဖြစ်သိုက်
ကော်မရှင်ပေးဆောင်ခြင်းမရှိဘဲ Bitcoin ကုန်သွယ်
ပြည့်စုံသော AvaTradeGO အက်ပလီကေးရှင်းသည်ပညာရေးဆိုင်ရာအကြောင်းအရာနှင့်ကိရိယာများပါ ၀ င်သည်
ကန ဦး သရုပ်ပြအကောင့်သည်ရက် ၃၀ အပြီးသက်တမ်းကုန်ပါမည်
အပိုင်း ၆: ယနေ့ Bitcoin ရောင်းဝယ်မှုကိုလေ့လာခြင်း - Walkthrough
အပိုင်း ၆ အထိပြုလုပ်ထားပြီးသော် Bitcoin ကိုလက်တွေ့ကျကျသဘောပေါက်ရန်မည်သို့လေ့လာရမည်ကိုသင်အဆင်သင့်ရှိနေသည်မှာသေချာသည်။ ပထမ ဦး စွာသင်သည်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အလွန်တန်ဖိုးထားသည့်အရစ်ကျစနစ်ဖြင့်စာရင်းဖွင့်ရန်လိုအပ်သည်။
အရာများကိုစူပါရိုးရှင်းစွာထားရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏လမ်းလျှောက်ခြင်းအတွက်ထိပ်တန်း Bitcoin ပွဲစား Capital.com ကိုအသုံးပြုသည်။
ပထမဆုံးလုပ်ရမှာက လည်ပတ်ဖို့ပါ။ မြို့တော် ဝဘ်ဆိုဒ်ကိုနှိပ်ပြီး 'အကောင့်ဖန်တီးပါ' ကိုနှိပ်ပါ။ သင်မည်သူဖြစ်သည်နှင့် ပတ်သက်သော အချက်အလက်အချို့ကို ထည့်သွင်းရန် လိုအပ်ပါသည်။
အရေးကြီးသည်မှာငွေကြေးဆိုင်ရာရာဇ ၀ တ်မှုများကိုတားဆီးရန်အတွက် KYC အရ - သင်သည်အစိုးရမှထုတ်ပြန်ထားသောဓာတ်ပုံ ID တင်ရန်လည်းလိုအပ်သည်။ ပြီးလျှင်သင်၏လိပ်စာအထောက်အထားကိုတင်ရန်လိုအပ်သည်။ လူအများစုက utility bills သို့မဟုတ်မကြာသေးမီကဘဏ်ရှင်းတမ်းကိုသုံးကြသည်။
သင်ကိုင်စရာမလိုပါက ID တင်ခြင်းသည်ယခုစောင့်ဆိုင်းနိုင်သည်။ ငွေထုတ်ရန်တောင်းဆိုခြင်း (သို့မဟုတ်ဒေါ်လာ ၂,၂၅၀ ထက်ပိုသောငွေဖြည့်သွင်းခြင်း) မပြုမီသင်စာရင်းသွင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်၏ဤအပိုင်းကိုဖြည့်စွက်ရမည်။
လှမ်း 3: အချို့ကုန်သွယ်ရန်ပုံငွေများအပ်နှံ
သင်၏အကောင့်အတည်ပြုအီးမေးလ်ကိုလက်ခံရရှိပြီးသောအခါသင်အိမ်မှ Bitcoin ကိုကုန်သွယ်ရန်သင့်အကောင့်ကိုသင်ငွေထောက်ပံ့နိုင်ပြီဖြစ်သည်။
သင်နေထိုင်သည့်ရရှိနိုင်သည့်ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းများမှ ရွေးချယ်၍ သင်၏ကုန်သွယ်မှုအကောင့်အသစ်တွင်သင်ထည့်သွင်းလိုသည့်ပမာဏကိုထည့်ပါ။ သင်မြင်တွေ့ရသည့်အတိုင်း၊ Capital.com တွင်သင်ရွေးချယ်လိုသောရွေးချယ်မှုများ၊ သင်၏ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကြိုက်နှင့်သင့်တည်နေရာပေါ် မူတည်၍ ရွေးချယ်နိုင်သည်။
အဆင့် ၄: Bitcoin အရောင်းအ ၀ ယ်လုပ်ပါ
စာရင်းသွင်းမှုလုပ်ငန်းစဉ်ပြီးဆုံးပါပြီ။ Bitcoin ကိုကုန်သွယ်ရန်သင်၏အမှာစာကိုအစောပိုင်းကဆွေးနွေးခဲ့သည့်အတိုင်း Capital.com တွင်ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ အမှာစာများပြန်လည်စုစည်းခြင်းအတွက်အပိုင်း ၂ အထိ scroll လုပ်ပါ။
သို့သော်၊ သင်သည် ၀ ယ်ခြင်း၊ ရောင်းခြင်းနှင့်ရွေးချယ်ရန်ရွေးချယ်သင့်သည်။
သင်၏လောင်းကြေးပမာဏကိုရွေး၊ ဖြည့်ထားသောအချက်အလက်အားလုံးကိုစစ်ဆေးပြီး 'Open Trade' ကိုနှိပ်ပါ။ ယခုအချိန်တွင်သင်ကညွှန်ကြားသည်အတိုင်းနှင့်၊
Bitcoin ကိုမည်သို့ကုန်သွယ်ရမည်နည်း - စီရင်ချက်
ဒီ Bitcoin လမ်းညွှန်ရောင်းဝယ်မှုကိုလေ့လာနည်းတွင်၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်စွန့်စားမှုစီမံခန့်ခွဲမှု၏အရေးပါမှုကိုအရောင်းအဝယ်လုပ်ခြင်း၏အကန့်အသတ်များအကြောင်းကျွန်ုပ်တို့ပြောခဲ့ပါပြီ။ ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောအခကြေးငွေများပေးရန်သင်၏မျက်စိကိုဖွင့်ပြီးမည်သည့်အကျိုးတူလုပ်ငန်းသစ်ကိုမဆိုသွားရန်လည်းအလွန်အရေးကြီးသည်။
အရေးကြီးသည်မှာအချက်အလက် (သို့) ကူးယူခြင်းကုန်သွယ်ရေးကိရိယာမှတဆင့်ကူးသန်းရောင်း ၀ ယ်ရန်စီစဉ်ခြင်းမရှိပါကသင်စျေးကွက်တွင်သင်ကိုယ်တိုင်ပညာဆည်းပူးရမည်။ ၎င်းတွင်အခြေခံနှင့်နည်းပညာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းကိုလေ့လာခြင်း၊ Bitcoin - သတ်သတ်မှတ်မှတ်သင်တန်းများကိုကြိုးစားလေ့လာခြင်းနှင့်ရှင်းလင်းသောကုန်သွယ်မှုမဟာဗျူဟာကိုရာထူးတစ်ခုစီတွင်ထည့်သွင်းခြင်းတို့ပါဝင်သည်။
Capital.com သည် အရာရာတိုင်းတွင် ထွန်းလင်းတောက်ပနေပါသည်။ ဤနေရာတွင် သင်သည် Bitcoin ကော်မရှင်ခအခမဲ့ - နှင့် လုံခြုံပြီး ထိန်းညှိထားသော ပတ်ဝန်းကျင်တွင် (FCA၊ CySEC၊ ASIC၊ နှင့် NBRB တို့ကြောင့်) ရောင်းဝယ်နိုင်ပါသည်။ ထိပ်တန်းဆုပေးပွဲစားသည် အခမဲ့သရုပ်ပြအကောင့်ကို ပေးဆောင်ပြီး မြန်ဆန်အဆင်ပြေသော ငွေပေးချေမှုအမျိုးအစားများကို လက်ခံပါသည်။ ထို့အပြင်၊ သင်သည် 10 မိနစ်ထက်နည်းသော Bitcoin အရောင်းအ၀ယ်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
ငါ Bitcoin အခမဲ့ရောင်းဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူနိုင်ပါသလား?
ဟုတ်တယ်၊ မင်းပွဲစားကကမ်းလှမ်းရင် Bitcoin ကို Demo အကောင့်ကိုသုံးပြီးအခမဲ့ရောင်းဝယ်ဖို့သင်ယူနိုင်တယ်။ သို့သော်၊ သင်၏အိမ်စာကိုလုပ်ရန်နှင့်စျေးကွက်၏အပြင်ပိုင်းများကိုလေ့လာရန်လည်းအရေးကြီးသည်။ eToro သည်အခမဲ့ Bitcoin သရုပ်ပြအကောင့်တစ်ခုကိုဒေါ်လာ ၁၀၀,၀၀၀ ဖြင့်စက္ကူရန်ပုံငွေများဖြင့်လေ့ကျင့်သည်။
ကုန်သွယ်တဲ့အခါ Bitcoin ကိုဘယ်လိုသိုလှောင်မလဲ။
သင်လိုချင်လျှင် Bitcoin ကိုသင်၏ကိုယ်ပိုင်ပိုက်ဆံအိတ်တွင်သိမ်းဆည်းထားနိုင်သည်။ သို့သော်၊ သင်သည်သင်၏ဒစ်ဂျစ်တယ်ဒင်္ဂါးများကို eToro အရောင်းအ ၀ ယ်ပလက်ဖောင်းတွင်သိမ်းဆည်းထားပါကသင်သည်တရားစီရင်မှုသုံးခုမှထပ်ဆင့်အကျိုးကျေးဇူးရရှိနိုင်သည်။ ဤသည်အဘယ်သူမျှမပိုအဖိုးအခမှာလာနှင့်ကုန်သွယ်ကော်မရှင် - အခမဲ့ဖြစ်ပါသည်ဆိုတဲ့အချက်ကိုဖော်ပြရန်မ!
ငါ Bitcoin အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်နိမ့်ဆုံးကဘာလဲ?
သင် Bitcoin တွင်သင်ရောင်းဝယ်နိုင်သို့မဟုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်သည့်အနည်းဆုံးပမာဏသည်သင်၏ရွေးချယ်သောပွဲစားအပေါ်မူတည်သည်။ eToro တွင် Bitcoin ကို ၂၅ ဒေါ်လာမှသာကုန်သွယ်နိုင်သည် - ကော်မရှင်ကင်းလွတ်သည်။
သင်အမှန်ပင်တတ်နိုင်သည် ၎င်းကို 'crypto-fiat' pair သို့မဟုတ်အချို့ကိစ္စများတွင် 'ငွေကြေးလက်ဝါးကပ်တိုင်' ဟုခေါ်သည်။ Bitcoin - တိကျတဲ့အတွဲများတွင် BTC / EUR, BTC / USD, BTC / GBP, BTC / JPY စသဖြင့်ပါဝင်ပါတယ်။
ငါ Bitcoin ပိုက်ဆံကုန်သွယ်လုပ်နိုင်ပါလိမ့်မည်နည်း
ဟုတ်သည်၊ အကယ်၍ သင် Bitcoin တန်ဖိုးမြင့်တက်လာခြင်းသို့မဟုတ်ကျဆင်းခြင်းကိုမှန်ကန်စွာကြိုတင်ဟောကိန်းထုတ်ပါက - နောက်ပိုင်းတွင်မှန်ကန်သောအမိန့်ကိုပေးခြင်းဖြင့်သင်သည်သင်၏ကုန်သွယ်မှုတွင်အကျိုးအမြတ်များရရှိလိမ့်မည်။